ပုသိမ်တွင် ဆန္ဒပြ သံဃာတော်နှင့် ဦးဆောင်သူများ အမှုဖွင့်ခံရ | ဧရာဝတီ
ပုသိမ်တွင် ဆန္ဒပြ သံဃာတော်နှင့် ဦးဆောင်သူများ အမှုဖွင့်ခံရ
သန့်စင်ငြိမ်းချမ်း| December 12, 2012 | Hits:132
5 | | လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းပေးရန် ဆန္ဒပြ တောင်းဆို သူများကို ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့က ပုသိမ်မြို့တွင် တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ – သန့်စင်ငြိမ်းချမ်း/ဧရာဝတီ)
ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့တွင် ၂ ရက် ဆက် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး ဆန္ဒပြပွဲ ဦးဆောင်သူ ၃ ဦးကို ပုသိမ်မြို့ရှိ အသည်ကြီး ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ရဲ သတင်းရပ်ကွက်မှ သိရသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၁၁ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင် ဆရာတော် ဦးတေဇောဘာသ (ခေါ်) ဦးပဉ္ဇင်းနိုင်ကြီး၊ တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူ ကိုကျော်စွာနှင့် ကိုမြင့်အောင်တို့အား ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် အသည်ကြီး စခန်းမှ ရဲအရာရှိတဦးက တရားလိုပြုလုပ်၍ ယနေ့ အမှုဖွင့်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“သူတို့ကို အမှုဖွင့်ထားတယ်။ “ပ” နံပါတ် (ပြစ်မှုနံပါတ်)တော့ မထွက်သေးဘူး။ ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ ဖွင့်ထားတာပေါ့။ အသည်ကြီးစခန်းက ရဲအရာရှိ တယောက်က တရားလိုလုပ်ပြီး အမှုဖွင့်ထားတာ။ တရားစွဲ၊ မစွဲတော့ မသိသေးဘူး”ဟု ပုသိမ် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူ တဦး က ပြောသည်။
ပုသိမ်မြို့ အမှတ် ၄ ရပ်ကွက် အသည်ကြီးရဲစခန်းသို့ ဧရာဝတီမှ သွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ရာ တာဝန်ရှိ ရဲဝန်ထမ်းတဦးက အမှုဖွင့်ထား သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားသည်။
“ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူ ၃ ယောက်ကို အမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စက စခန်းမှူး ခွင့်ပြုမှ ပြောလို့ရမှာပါ။ ခွင့်မပြုရင် ပြောပြလို့ မဖြစ်ဘူး ခင်ဗျ”ဟု အဆိုပါ ရဲဝန်ထမ်းက ပြောသည်။
ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ ဦးဆောင် ၃ ဦးသည် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ကို မြို့နယ်နှင့် တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့များထံ ၇ ရက် ကြိုတင် တောင်းခံ ခဲ့သော် လည်း ခွင့်မပြုသဖြင့် မူလသတ်မှတ်ထားသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြရာမှ ယခုကဲ့သို့ အမှုဖွင့်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
အမှုဖွင့်ခံထားရသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ရွှေဝါရောင်ဆရာတော် ဦးတေဇောဘာသက“ဦးပဉ္ဇင်းတို့ကတော့ မြန်မာပြည်ကြီး ကောင်းစားရေး အတွက် လုပ်နေတာပါ။ အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ထိပါးလာလို့ အခုလိုတွေ လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ပြည်သူ လူထု မလိုလားတဲ့ ဒီ စီမံကိန်း မရပ်မချင်းကတော့ ဖမ်းဆီး တရားစွဲထောင်ချလည်း ရင်ဆိုင်သွားမှာပါ”ဟု ပြောသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူများအား အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်ကို ရှုတ် ချ ပွဲများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ရာ တသီးပုဂ္ဂလ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအပြင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ပုသိမ်ခရိုင်)၊ လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ကာကွယ်ရေး ကွန်ရက်(HRWDN) နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ ကွန်ရက်(NDN) အဖွဲ့များပါ ပူးပေါင်း၍ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများက “၀မ်ပေါင် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေး”၊“သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ မပပျောက်ရေး”၊“ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းနှင့် သယံဇာတများ အလွဲသုံးစားပြုလုပ်ခြင်း – အလိုမရှိ” စသဖြင့် ကြွေးကြော် ၍ ပုသိမ်မြို့ရှိ အဓိကကျသည့် နေရာများနှင့် လူစည်ကားရာဈေးများ အနီးတွင် လှည့်လည် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆန္ဒဖော်ထုတ်စဉ်အတွင်း နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ခရိုင် ရဲ ရုံး၊ ရဲ အထူး သတင်းတပ်ဖွဲ့၊ စစ်ဖက်ရေးရာ ထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့များက ဗီဒီယို၊ ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသော်လည်း တစုံတရာ တားဆီးနှောင့်ယှက်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သည့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲသို့ တိုင်းအဆင့် သံဃနာယက အဖွဲ့မှ စေလွှတ်လိုက်သည်ဟု ဆိုကာ သံဃာတော် တပါး က ဆိုင်ကယ်ဖြင့် လိုက်ပါကြည့်ရှုပြီး ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းယူခြင်း၊ သတင်းပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
“ဦးပဉ္ဇင်းက တိုင်းအဆင့် သံဃနာယက အဖွဲ့ကပါ။ ဒီ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုမှာ ပုသိမ်က သံဃာတွေ ပါဝင်တာ ရှိမရှိ လိုက်ကြည့်တာ ပေါ့။ ဒီက အခြေအနေတွေ အကုန်လုံးကိုလည်း အထက်က ဆရာတော်တွေဆီကို သတင်းတွေဆက်တိုက် ပေးပို့နေတယ်။ ဘုန်းကြီး တွေ ဒဏ်ရာရတဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်လို သဘောထားလဲ ဆိုတော့ သံဃာအလုပ် သံဃာလုပ်ပေါ့နော်။ သံဃာတော်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ဘုန်းကြီးတို့ သံဃနာယက က ဒီလိုပဲ သတ်မှတ်ပါတယ်”ဟု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ သတင်းလိုက်ယူသည့် နဂါးနှစ်ကောင် ကျောင်း တိုက် မှ အဆိုပါ သံဃာ က မိန့်ကြားသည်။
ယနေ့ကျရောက်သည့် ၁၂. ၁၂. ၂၀၁၂(၁၂ သုံးလုံး) နေ့တွင်လည်း လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းရေး တောင်းဆိုပွဲနှင့် အကြမ်းဖက် နှိမ်းနှင်းခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်အပေါ် ရှုတ်ချပွဲများ ပုသိမ်မြို့၌ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဦးဆောင်သူများက ပြော သည်။
ကချင်တိုင်းရင်းသူ စစ်တပ်ဖမ်းဆီးမှု နေပြည်တော်၌ ကြားနာမည်
ချင်းပြည်နယ် ဘတ်ဂျက် လျာထားချက် ၀.၁ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိ
၀န်ကြီးဌာနများတွင် အတွင်းဝန် ရာထူးများ ခန့်အပ်ရန် စီစဉ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment Sai Linyone December 12, 2012 - 10:52 pm	Corruption of the government is the core issue of the current unrest in Burma. No one other than the government is responsible to solve it. As long as this serious corruption is tackled by the Thein Sein administration, Burma will face endless problems.
မီဒီယာဥပဒေကို စာနယ်ဇင်းကောင်စီက လွှတ်တော်သို့ တိုက်ရိုက်တင်မည်
လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းပြီး ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ပြန်/ဆက် ဒုညွှန်မှူး အမှုဖွင့်ခံရ